ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဤခရီး နီးသလား
နေပြည်တော် ချီတက်မည့် ရွှေလုပ်သားများ ဖြစ်ပါသည်
ရေနီအ၀င်တွင် ရဲများ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးနေကြ၏
တုတ်၊ ဓား လက်နက် ပါသူများ မဟုတ်ကြပါ
တနင်္သာရီတိုင်း သွားမည့်သူများ ပါသည်
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြပါ၏
ပန်းကုံးစွပ် ကြိုဆိုသည့် ပရိသတ်ပြည်သူ များပြားလှပါ၏
‘Burma’ ဟုသာ ဆက်၍ ခေါ်ပါမည်
စိုးမိုး/ငြိမ်းကော်မတီမှ အစီရင်ခံစာ တင်လိုက်ပါသည်
တရားသူကြီးများအထက်တွင် အာဏာပိုင်များ လွှမ်းမိုးနေသည် ဆိုပါ၏
“ဒါလေးများ ဒါလေးများ လာပြီး ပြောနေကြတယ်” သီချင်း လာနေပါသည်
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကြီးကိုယ်တိုင် မိုက်ခွက်ကိုင် ဟဲနေခြင်းဖြစ်ပါ၏
အခင်းဖြစ်ပြီး ၄ လအကြာမှ အကောင်အထည်ပေါ်ပါ၏
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ပြည်သူ့အသံ နားစွင့်နေကြပါသည်
နားလေး၍ ဖင့်နှေးနေကြသည်ကိုတော့ ခွင့်လွှတ်စေလို၏
ကျောင်းမပြောင်းချင်သူများ ဆန္ဒပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်
တိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားများ ဖြစ်ကြပါ၏
လမ်းမပေါ် ဖြစ်သလိုအိပ်ရင်း ဆန္ဒဆက်ပြနေကြပါ၏
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် လျှောက်လှမ်းလာရ၏
လောလောဆယ် နေရာအနှံ့ ဆန္ဒပြတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါသည်
ထိုနေရာများ အနာရင်းသလို ယောင်ကိုင်းနေကြပါ၏
ဆီလူးပေးမည့် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ရောက်မလာကြသေးပါ
တချို့ ခရီးထွက်၊ တချို့ လွှတ်တော်တက်နေကြပါ၏
မိန့်ခွန်းများတွင်တော့ ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှ အောင်ပွဲရမည်ဆိုပါသည်
တိုက်ပွဲဝင် ပြည်သူများထံတော့ အဘယ်ကြောင့် ရောက်မလာကြပါသနည်း
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 2:36 AM
ကဗျာရှင် ကိုလတ် အား
ကျွန်ုပ် NLD ၀န်းထရံ တစ်ယောက်အနေဖြင့်
ဤနေရာမှ ဖွင့်ဟ ပြောကြားလိုသည်မှာ..
ကျွန်ုပ်တို့ ၏အမေ သည်ကား...
ခက်ဆစ် ဝေါဟာရ များကို
ဖွင့်လှစ် ဖော်ကျုးံ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းများစွာဖြင့်
လွှတ်တော် ထဲ တွင် နပန်း လုးံသွားမည်ကို
မိတ်ဆွေကြီးကို အသိပေးလိုခြင်းပင်တည်း။ ။
မယောင်သေးသည့် အရာ များကို
ဆီ လူးနေကုန် ကြရှာလေသော တာဝန်ရှိသူများအားလည်း....
ဘာဘာ ဘာမှ နားမလည်နိုင်တော့ခြင်းများစွာ
ဖင် ကြား ခဲ ညှပ်သည့် အဖြစ်ထက်
စိုး သည့်အဖြစ် များဖြစ် နေလေသည်လား..ဟု
ကယောင်ကတမ်း ကျွန်ုပ်ကို ကျွန်ုပ်
များပင် ဖြစ်ခဲ့ ရလေ၏။ ။
GOOD POEM reflecting present situation.
Directly hit to the heart !
ကြားရဲ့ လား Crony လွတ် တော် ကိုယ် စ လှယ် မအေ...
အသက် ၆၈ နှစ်ထဲဝင်နေပြီဖြစ်သော
ထောင်ထဲမှာ အနှစ် ၂၀ လောက် နေခဲ့ရသော ၈၈
ကျောင်းသားများ အတိုးချပြီး ဘီယာလေးသောက် အ
ဒီနေ့ လယ်သမားတွေ အလုပ်သမားတွေ ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြခွင့်
ရနေတာ ဆန္ဒပြရဲနေတာ ဘာကြောင့်လို့ထင်ပါသလဲ၊၊
လူပြိန်းကြိုက်စကားလုံးတွေ စာသားတွေက ဤခရီးကိုပိုမနီးစေနိုင်ဘူး၊၊
ဤခရီး နီးချင်ရင် အနည်းဆုံး ၂၀၁၅ ထိတော့ ကျွန်တော်တို့ကျောချင်း ကပ်ထားကြရမယ် ၀န်းရံထားကြရမယ်၊၊